राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट फुटबल
विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) को नयाँ वरियतामा नेपाल यथास्थानमै रहन सफल भएको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल १७० औँ स्थानमा रहेको हो ।
एजेन्सीजेष्ठ १२, २०७७
एजेन्सीजेष्ठ ५, २०७७
अहिले तत्काल नेपाली टिमको प्रशिक्षक पद खाली छ । नेपाली टिमका सबै खेलाडी राम्रो भएर प्रशिक्षक नै नचाहिएको स्थिति भने होइन । यही स्थितिमा बीच–बीचमा जगत टमाटाले टिम हेरिरहेका छन् । खासमा नेपाललाई सकेसम्म चाँडै प्रशिक्षक चाहिएको छ, त्यो पनि अब्बल दर्जाको ।
हिमेशरत्न बज्राचार्यजेष्ठ ४, २०७७
खेल्नु अगाडि सबै खेलाडीलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको त छैन भनेर कडिकडाउ रुपमा परीक्षण गर्नु पर्नेछ । यी सबै निर्णय लागु गर्न प्रत्येक देशको लिग आयोजकले यूईएफसँग अनुमति पनि लिनुपर्नेछ ।
पछिल्लो घटनाक्रमबारे नेयमारले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो सबै समाचार बीच नेमायरकोबुबा कता छन्, त्यो पनि बाहिर आएको छैन । नेयमार आफ्नो आमासँग जति नजिक छन्, बुबासँगपनि उत्तिकै नजिक छन् ।
फुटबलमा सबैभन्दा बढी महत्व लिगकै हुन्छ, तर नेपाल जस्तो देशमा नकआउट प्रतियोगिताको पनि उत्तिकै भूमिका छ । भूकम्पपछि नेपाली फुटबललाई जीवन्त राख्न सबैभन्दा बढी भूमिका यिनै नकआउट प्रतियोगिताले गरेको थियो ।
एउटा खुशीको समाचार क्रिकेटबाट पनि आएको थियो, केहि दिन अगाडी । त्यसअनुसार क्रिेकेट खेलाडी संघ (सीप्यान) ले आयोजना गर्ने भनेको क्रिकेट अवार्डको सबै पुरस्कार रकम कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले खडा गरेको कोषलाई प्रदान गरेको छ ।
यहाँनिर एउटा प्रश्न पनि छ, इटाली र स्पेनमा किन कोरोना भाइरस संक्रमण बढी देखियो त ? यसका सम्भावित उत्तर धेरै छन् र त्यसमध्ये एउटा कारण फुटबललाई पनि मानिएको छ ।
एजेन्सीवैशाख ७, २०७७
त्यसो त कोरोना भाइरसको संक्रमणले पूरा विश्व आक्रान्त छ र यसको महामारीले नछोएको त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जसले आफू जोगिएको अनुभव गर्न सकोस । यस्तोमा विश्व खेलकुद मात्र कसरी अछुतो रहन सक्छन् र ? कोरोना भाइरसको संक्रमणले सबैभन्दा बढी नराम्रोसँग प्रभावित भएकोमा विश्व खेलकुद पनि रह्यो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हाम्रा नेपाली खेलाडीको दैनिकी पनि फेरिएको छ, यसअघि कहिले पनि नचिताउने गरेर । देशमा लागू रहेको लकडाउनका कारण खेलाडी पनि घरमै सीमित भएका छन् । उनीहरूको नियमित रूपमा रंगशाला अथवा अन्य कुनै खेल स्थलमा जाने र अभ्यास गर्ने दैनिक अहिले छैन, त्यो त सम्भव नै रहेन् ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले सार्वजनिक गरेको वरियताक्रममा नेपाल यथास्थानमै रहन सफल भएको छ ।
१ सय २० वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको ओलम्पिक प्रतियोगितामा क्रिकेट खेललाई पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा ब्रिटेन र फ्रान्सले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म क्रिकेटले ओलम्पिकमा स्थान पाएको छैन ।
अहिलेका कप्तान ज्ञानेन्द्र र उनको समूहसँग सन्दीपको सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण पनि क्रिकेटमा समस्या बढिरहेको छ ।
हिमेशरत्न बज्राचार्यचैत्र १, २०७६
स्कटिस खेलाडीहरूमै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि खेलनै नहुने देखिएको छ । स्कटिस टिमका ७ खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अहिले उनीहरूलाई आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ ।
पूर्वेली फुटबलको तुलनामा सुदूरपश्चिम धेरै पछाडि छ । पूर्वको पहुँच पनि राम्रो छ । त्यसैले हामीले गर्नु पनि काम पनि धेरै छ । यस्तै धेरै गर्नुपर्ने काममध्ये एक भएको छ, सुदूरपश्चिम–११ फुटबल क्लब ।
लिगमा ०६० यता जति पनि संस्करणका लिग भए, विजेतादेखि रेलिगेसनमा परेका लगभग सबै क्लबले कुनै न कुनै मोडमा खेल मिलोमता गरेर नै खेलेका छन् । ‘अफ द रेकर्ड’ सबै क्लबका पदाधिकारी र खेलाडीले हाकाहाकी भन्ने गर्छन्, ‘यो–यो खेलमा मिलोमतो भएको थियो, यो–यो खेलको नतिजा पहिले नै तय थियो ।’ केहीले ख्यालख्यालमै खेल मिलोमतो गरे ।
हिमेशरत्न बज्राचार्यफाल्गुन २४, २०७६